Si Deg Deg Ah Kooxo U Soo Raadsada- Seefta Ronald Koeman Oo Si Dhab Ah Ugu Dhacday Ciyaartoy Magac Wayn. - Gool24.Net
Si Deg Deg Ah Kooxo U Soo Raadsada- Seefta Ronald Koeman Oo Si Dhab Ah Ugu Dhacday Ciyaartoy Magac Wayn.
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman oo fulinaya go’aanka ka soo baxay madax waynaha kooxdiisa ee Bartomeu ayaa si cad ugu sheegay ciyaartoyda aan qorshihiisa xili ciyaareedka cusub ku jirin in ay si deg deg ah kooxo u soo raadsadaan.
Ronald Koeman ayaa telefoon ka wacay dhawr ciyaartoy oo kooxda kowaad ah kuwaas oo uu si toos ah ugu sheegay in ayna ku jirin qorshihiisa xili ciyaareedka cusub.
Ugu horayn waxa uu markiiba Ronald Koeman telefoonka ka wacay Luis Suarez wuxuuna u sheegay in aanu ku jirin qorshihiisa Barcelona isla markaana uu koox soo raadsan karo waxayna haddaba Barca la balantay garyaqaanka Suarez si heshiiskiisa loo kansalo.
Kadib waxa uu Ronald Koeman telefoon ka wacay Arturo Vidal wuxuuna xidiga reer Chile ku war galiyay in uu koox cusub soo raadsado oo aanu ku jirin liiska ciyaartoyda uu xili ciyaareedka cusub ku shaqaynayo.
Ronald Koeman ayaa doonaya in xili horeba uu xaliyo ciyaartoyda aanu kooxdiisa ka doonayn si uu u bilaabo dib u dhiska kooxda wuxuuna Suarez iyo Vidal markiiba ka saaray ciyaartoyda uu la soo hadhayo.
Ronald Koeman ayaa saacadaha soo socda u balansan in uu la hadlo ciyaartoy kale oo kooxdiisa Barcelona ah si uu ugu cadeeyo in ay bixi karaan oo ayna kooxda mustaqbal ku lahayn waxaana ku jira Ivan Rakitic oo uu isna u sheegayo in uu koox soo raadsado.
Ronald Koeman ayaa sidoo kale la hadli doona Samuel Umtiti iyo Junior Firpo kuwaas oo uu ku war galin doono in ayna ku jirin ciyaartoyda uu ku shaqayn doono xili ciyaareedka cusub.
Laakiin Ronald Koeman ayaan ku deg degayn in uu telefoon ka waco ciyaartoyda kala ah Sergio Busquets, Sergi Roberto iyo Gerard Pique kuwaas oo waqti kale sii sugi doona in ay ogaadaan go’aanka rasmiga ah ee ay kooxdoodu ka qaadatay.
Busquets, Pique iyo Roberto ayaan wali loo sheegin wax mustaqbalkooda la xidhiidha waxayna ku sii jiri doonaan hubanti la’aan ilaa inta uu Ronald Koeman kala xaqiijinayo.
Laakiin Jordi Alba ayaa lagu war galiyay in uu isagu ka badbaaday isbadalka kooxda laga samaynayo isla markaana uu qayb ka yahay qorshaha xili ciyaareedka cusub ee Ronald Koeman.
Ronald Koeman ayaa wada qorshe uu si deg deg ah ugu kala nadiifinayo ciyaartoyda uu kooxda ku sii haysanayo iyo kuwa uu fasaxayo waxayna seeftii ugu horaysay si buuxda u qaaday Suarez iyo Vidal oo uu ku war galiyay in ay si deg deg ah kooxo u soo raadsadaan.
Laakiin burburinta heshiisyada Vidal iyo Suarez ayaa u baahan sharciyad iyada oo garyaqaanka Suarez uu saacadaha soo socda la fadhiisan doono maamulka Barcelona.